Maxaabiis lagu Wareejiyay Maamulka Puntland (Akhriso Magacyada iyo Beelaha ay ka soo Kala Jeedaan) | IshaBay Dhaba
Maxaabiis lagu Wareejiyay Maamulka Puntland (Akhriso Magacyada iyo Beelaha ay ka soo Kala Jeedaan)
Waxaa doraad laga dejiyay magaalada Boosaaso maxaabiis burcad badeed ah, kuwaas oo ku xirnaa dalal kala duwan oo caalamka ah, iyadoo maxaabiista loo soo wareejiyey sida la sheegay xabsiyo cusub oo loogu talogalay in lagu hayo kooxaha burcad badeeda oo laga hirgeliyey deegaanada Puntland.
Sida warku sheegayo waxaa shalay markii ugu horeysay lagu wareejiyay maamulka Puntland 5 ka mid ah 40-dhalinyaro Soomaali ah, kuwaas oo xabsiyo ku yaala caalamka ugu xirnaa dembiyo la xiriira burcad badeednimo, kuwaas qurshuhu yahay in Puntland lagu wareejiyo si ay halkaasi ugu dhameystaan xabsiyada lagu xukumay oo u dhexeeya 10 illa 24-sano.
Kooxahan maxaabiista ee Soomaalida ah oo laga soo qaaday Jasiiradda Seychelles ayaa shalay lagu wareejiyey maamulka Puntland, waxaana inta ka dhiman xabsiyada horey loogu xukumay ay ku dhameysandoonaan xabsiyo ku yaala Puntland.
Xubna shalay lagu wareejiyey maamulka Puntland ayaa magacyadoodu iyo dhalashadoodu waxaa lagu kala sheegay sida tan:-
1. C/laahi Maxamed Xuseen (Darood/Majeerteen)
2. Salaad Maxamed Diiriye (Hawiye/Habargidir)
3. Ina Mire Muuse (Daarood/Majerteen/Ciise Maxamuud)
4. Cabdi Axmed Faarax (Daarood/Mareexaan)
5. C/qaadir Xaashi Cawaale (Hawiye/Habargidir).
Qaramada Midoobay ayaa heshiis kula gashay maamulka Puntland inay deegaanada ka dhisaan xabsiyo waa-weynoo lagu hayo kooxaha burcad badeeda soomaalida ee xabsiyada kala duwan adduunka kaga jira kuwaas oo loo qoondeeyay in xabsiyada lagu kala xukumo ay ku dhameystaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan mamulka Puntland oo loo arkay inuu ka xasiloonyahay Soomaaliya inteeda kale.